တတယ်တော့ဗိုလ်ချူပ်အောင်ဆန်းကလွတ်လပ်ရေးဖခင် မဟုပ်ခဲ့ရပါကြောင်း | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
February 9, 2017 drkokogyi
.ဗမာပြည်လွတ်လပ်ရေး ဘယ်လိုရလာခဲ့သလဲ? ဘယ်သူ ယူပေးခဲ့သလဲ?
(အနှစ်(၇၀)နီးပါး လိမ်ညာဝါဒဖြန်.ခဲ့သည့် သမိုင်းအမှားများမှ ကင်းဝေးကြပါစေ)
ဒုတိယကမ္ဘာစစ် စစ်ပွဲကာလအတွင်းနှင့် စစ်ပွဲအလွန်ကာလအတွက် မဟာမိတ်
အင်းအားကြီးနိုင်ငံများ၏ စစ်ပွဲရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ၁၉၄၁ ခု
နှစ်၊သြဂုတ်လ (၁၄) ရက်နေ.တွင် အမေရိကန် သမ္မတ ရုဆဘဲလ်တ်နှင့် ဗြိတိန်
ဝန်ကြီးချုပ် ချက်ချဲယားတို. ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။အဲဒီ
ပူးတွဲကြေညာချက်ကို နောက်ပိုင်းမှာ Atlantic Charter အတ္တလန်တစ်ချပ်တာ
အဲဒီအချိန်မှာ အင်္ဂလိပ်ကို ဂျာမနီနာဇီတပ်က ဝင်တိုက်ဖို. ပြင်ဆင်နေသည့်အချိန်
ဖြစ်သည်။ပြင်သစ်နိုင်ငံကို နာဇီတပ်က ဝင်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်သည်။အမေ
ရိကန်နိုင်ငံအနေဖြင့် အဲဒီအချိန်အထိ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ထဲကို မပါဝင်ခဲ့ပေ။အမေ
ရိကန်နှင့် မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ.ကို အကူအညီလိုအပ်နေသည့် ဗြိတိန်က အမေရိကန်
ဆီ အကူအညီတောင်းရာကနေ အခုလို အတ္တလန်တစ်ချပ်တာဆိုတာ ပေါ်လာ
ပူးတွဲကြေညာချက်ထဲမှာ အဓိက (၈) ချက်ပါဝင်သည်
၁) ဗြိတိန်နိုင်ငံအနေဖြင့်ရော၊အမေရိကန်အနေဖြင့်ရော နယ်နိမိတ်မတိုးချဲ.ရ။
၂) နယ်နိမိတ်ပြန်လည် သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူလူထုရဲ.ဆန္ဒ
၃) လူများအားလုံး ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်၊ပြဌာန်းခွင့်ရှိစေရမည်။
၄) ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး လမ်းကြောင်း အတားအဆီးများ လျှော့ချမည်။
၅) ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် လူမှုဖူလုံရေး ဖွံ.ဖြိုးမှု ဖြစ်စေ
၆) ပါဝင်သူများ အနေဖြင့် လိုချင်တဲ့ကမ္ဘာနှင့် ကြောက်ရွံ.တဲ့ကမ္ဘာမှ လွတ်မြောက်
၇) ပါဝင်သူများအနေဖြင့် ပင်လယ်လွတ်လပ်မှုအတွက် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရ
၈) ကျူးကျော်နိုင်ငံများ လက်နက်ချရေးနှင့် စစ်ပွဲအလွန် လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး
ဖြစ်စေရမည် ဟု ရေးသားထားပါသည်။
ဤအတ္တလန်တစ်စာချုပ်ကို အမေရိကန်နှင့် ဗြိတိန်တို. ပူတွဲရေးသားလက်မှတ်
ထိုးပြီးတဲ့နောက် ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ (၂၄) ရက်နေ.တွင် မဟာမိတ်
နိုင်ငံများက လက်ခံအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီး ၁၉၄၂ ခုနှစ်၊ ဇန်နာဝါရီလ (၁) ရက်နေ.
တွင်ဟစ်တလားဝါဒကို ဆန်.ကျင် ကာကွယ်သွားဖို. နိုင်ငံအများစုက စုပေါင်းပြီး
ကုလသမဂ္ဂကြေညာစာတမ်းအဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ကြေညာခဲ့ပြန်သည်။
ဤနေရာမှာ အတ္တလန်တစ်စာချုပ်သည် အာရှနိုင်ငံများနှင့်သက်ဆိုင်ခြင်းရှိမရှိ
ဆန်းစစ်လေ့လာတဲ့အခါ အမေရိကန်သမ္မတ ရုဆဘဲလ်တ်၏ မိန်.ခွန်း စာရေး
ဆရာ ရောဘတ် အီး ရှာဝုဒ်က ဒီလိုမှတ်ချက်ပေးပါသည်။
အိန္ဒိယ၊ဗမာ၊မလေရှားနှင့် အင်ဒိုနီရှားက ပြည်သူများမှ အတ္တလန်တစ်စာချုပ်ကို
ပစိဖစ်နှင့်အာရှနိုင်ငံများအထိ တိုးချဲ.မှုရှိမရှိ မေးခွန်စထုတ် မေးမြန်လာတဲ့အချိန်
မှာဘဲ “မဟာမိတ်များ၏ကူညီမှုရယူမှသာလျှင် အောင်မြင်နိုင်မည့် စစ်ပွဲတစ်ခု
အနေဖြင့် ရုဆဘဲလ်ရဲ.ဖြေရှင်းပုံက ဗြိတိန်ကို ဖိအားပေးမှုတစ်ချို.လုပ်ခဲ့သော်
လည်း ကိုလိုနီနိုင်ငံများ၏ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိစ္စနှင့်စပ်လျဉ်၍ စစ်ပွဲပြီးဆုံးတဲ့
အထိ ရွှေ.ဆိုင်းထားသည်ဟု“ ရေးသားထားပါသည်။အဓိပ္ပါယ်ကတော့ စစ်ပွဲပြီး
ရင် အင်္ဂလိပ်တို. သိမ်းပိုက်ထားသည့် ကိုလိုနီနိုင်ငံများကို ပိုင်ရှင်လက်ထဲ ပြန်
Roosevelt’s speechwriter Robert E. Sherwood noted that “it was not long before the people of India, Burma, Malaya, and Indonesia were beginning to ask if the Atlantic Charter extended also to the Pacific and to Asia in general.” Withawar that could only be won with the help of these allies, Roosevelt’s solution was to put some pressure on Britain but to postpone until after the war the issue of self-determination of the colonies.
အကျဉ်းခြုံပြီး ပြောရရင် အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ ဗမာ့တပ်မတော်မှ အင်္ဂလိပ်
တွေကို တိုက်ထုတ်ပြီး အင်္ဂလိပ်တွေ ခွေးပြေး ဝက်ပြေး ဆုတ်ခွာသွားတာ မဟုတ်
သလို၊အောင်ဆန်းက လွတ်လပ်ရေးယူပေးခဲ့တာလည်း မဟုတ်ပါ။အတ္တလန်တစ်
စာချုပ် ချုပ်ဆိုတဲ့သတင်းကို ကြားသိရပြီး အခွင့်ကောင်းတစ်ခုအဖြစ် အသုံးချခဲ့
ခြင်းသာ ဖြစ်သည်။ယင်းကဲ့သို. ဖြစ်ခဲ့တာတောင်မှ စာချုပ်ရဲ. ဒုတိယအချက်မှာ
ပါသည့် နယ်နိမိတ်များပြန်လည် ချမှတ်တဲ့နေရာမှာသက်ဆိုင်ရာ ပြည်သူလူထု
ရဲ.ဆန္ဒအတိုင်းသာ ဖြစ်ရမည်ဆိုတဲ့အချက်နဲ.အညီ ဗမာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေး
ပေးတဲ့အခါ ဗမာတစ်မျိုးတည်းလက်ထဲကို မအပ်ခဲ့ပေ”။အောင်ဆန်းတို.အဖွဲ.ကနှစ်ခါတောင် သွားတောင်းခဲ့ပြီး အဆင်မပြေမှ ပင်လုံစာချုပ်
ပြည်သူလူထုရဲ. သဘောတူညီချက်ကို အင်္ဂလိပ်ထံ ပြန်တင်ပြပြီး တောင်းလာတယ်”။တောင်တန်းဒေသက ပြည်သူများ ဗမာနဲ.အတူ လွတ်လပ်ရေးယူမည်ဆိုတဲ့ ဆန္ဒကို အင်္ဂလိပ်တို. မဖြစ်မနေ လေးစားပြီး ပေးခဲ့ရသည်။
ထို.ကြောင့်၊အောင်ဆန်းက ဗမာပြည်ကို လွတ်လပ်ရေးယူပေးခဲ့လို. အာဇာနည်
သူရဲကောင်းဖြစ်တယ်။ဗမာ့တပ်မတော်က တိုက်ခိုက်လို. အင်္ဂလိပ်ကိုလိုနီလက်
အောက် လွတ်မြောက်ခဲ့တယ် ဘာညာ သမိုင်းအမှားကို ရိုက်သွင်းလာခဲ့ပြီး အစဉ်
အလာကြီးတဲ့ အာဇာနည်သူရဲကောင်းများ၊အစဉ်အလာကြီးတဲ့ တပ်မတော်ဆိုပြီး
ကလေးတွေက သမိုင်းအမှန်မသိဘဲ စစ်တပ်ကို အထင်ကြီးခဲ့ကြသည်။ထို.ကဲ့သို.
အစဉ်အလာကြီးတဲ့ အာဇာနည်သူရဲကောင်းတွေကြောင့် သူရဲကောင်းကိုးကွယ်
တဲ့ဝါဒနှင့် စစ်တပ်ကို အခွင့်ထူးပေးသည့် အမြင်က တွယ်ကပ်လာခဲ့ပြီး ဒီနေ.ဒီအ
ချိန်အထိ ဆွဲထုတ်လို. မကုန်သေးဘဲ ဖြစ်နေရသည်။သူရဲကောင်းကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒ
နှင့် စစ်တပ်ကို အထင်ကြီးတဲ့ အတွေးကြောင့် တိုင်းပြည်က စစ်အာဏာရှင်စနစ်
မကြီးစိုးသင့်ဘဲ ကြီးစိုးခဲ့သည်။နိုင်ငံရေးမှာ စစ်တပ်ဝင်မရှုပ်သင့်ဘဲ ဝင်ရှုပ်ခံနေ
ရသည်။သူရဲကောင်းကိုးကွယ်တဲ့ဝါဒကြောင့် ခေါင်းဆောင်းကောင်းများ ပေါ်ထွန်း
သင့်သလောက် မပေါ်ထွန်းဘဲ ဖြစ်နေရသည်။
အနှစ် (၇၀) နီးပါး လိမ်ညာဝါဒဖြန်.ခဲ့သည့် သမိုင်းအမှားများမှ
Atlantic Charter – http://www.encyclopedia.com/…/international-organi…/atlantic
မိတ်ဆွေတချို့မေးတယ်၊ အောင်ဆန်းရုပ်တု ကန့်ကွက်သလားတဲ့၊ ကန့်ကွက်ပါတယ်လို့၊ ဗိုလ်ချုပ်ကိုမလေးစားဘူး လားတဲ့၊ ဟ လေးစားတာပေါ့၊ ဗမာတွေရဲ့ခေါင်းဆောင်ကောင်း တယောက်လေ၊ အတုယူဖို့ကောင်းတယ်၊ သူ့ဗမာလူမျိုးတွေကို ချစ်ပြီး ကောင်းစားစေချင်လို့ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း၊ ကယား တွေကို ပြည်ထောင်စု ဖွဲ့ဖို့စည်းရုံးခဲ့တာလေ၊ အညာ နဲ့ မြေလတ် ဒေသ က ရေငန်၊ မြက်ခြောက်ကလွဲ လို့ဘာမှမရှိတာ ကိုသူသိတယ်လေ၊ ဒါကြောင့်နောင်တချိန်မှာ ကချင်ရဲ့ ကျောက်စိမ်း၊ ရွှေ၊ သစ်၊ ကယားရဲ့သတ္တု၊ ကျောက်၊ ကျွန်းသစ်၊ ရှမ်းရဲ့ သတ္တုမျိုးစုံ ကို အသုံးပြုပြီး ဗမာ လူမျိုးကောင်းစားရေး အတွက် ကြိုတင်စီမံခဲ့တယ်လေ၊ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက် ဒီလို စီမံကိန်း ချနိုင်တဲ့ ဦးနှောက် ပိုင်ရှင်ကို လေးစားတာပေါ့၊ ဒါပေမဲ့ ကချင်ခေါင်းဆောင် မဟုတ်ပါ၊ ဒီအတွက် ကချင်ဒေသမှာ အောင်ဆန်းရုပ်တုကို လုံးဝ ကန့်ကွက်တယ်၊ တခုရှိသေးတယ်၊ မြစ်ကြီးနားကသခင်နက်ဖေလမ်း၊ ဒီလူက ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မှာ မဟာမိတ်တပ်က သေဒဏ်ပေးခံရသူ၊ ကချင်ပြည်သားလည်းမဟုတ်၊ သခင်နက်ဖေဟာ ကချင်ပြည်ကို ဖက်ဆစ် ဂျပန်နဲ့ လိုက်လာပြီး ကချင် လူမျိုးများကို အကြီးအကျယ် ဒုက္ခ ပေးနှိပ်စက်ခဲ့သူ၊ ပြည်ထောင်စု ကိုပြန်ကယ်တင်ခဲ့တဲ့ ဆမားဒူဝါ အိမ်ရှေ့လမ်းမကြီး က သခင် နက်ဖေလမ်း ဖြစ်နေတယ်၊ ကချင်ဒေသမှာ ကချင် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ရုပ်တု စိုက်တယ်ဆိုရင် ကြားကောင်းသေးတယ်၊ ဗမာ လူမျိုးများကို မုန်းလို့ ပြောတာမဟုတ်ပါ၊ မုန်းစရာ ကောင်းအောင် လုပ်နေတဲ့ ဗမာ တချို့ကြောင့်ပါ။ Kareng Bawm Awn
← ခေါ်ရင်ထူး ခိုင်းတာလုပ် ခံမပြောနဲ့ဆိုတဲ့ တသွေးတသံ အမိန့်နာခံမှုတစ်ခုအောက်မှာ အများညီရင် “ဤ ကို ကျွဲ ´´လို့ လက်ခံဖို့ အလွန်လွယ်ကူသည်
WW2 Burma and Kachin →